Ugu yaraan 19 qof oo ku dhimatay qarax ka dhacay suuq kalluun oo kuyaala Nayjeeriya - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldUgu yaraan 19 qof oo ku dhimatay qarax ka dhacay suuq kalluun oo kuyaala Nayjeeriya
February 17, 2018 Abdirahman Abdullahi Sheikh World 0
Intooda badan dadka qaraxa ku geeriyooday waxay ahaayeen shacab. [Sawirka: AFP]
Abuja-(Puntand Mirror) Saddex qof oo isa soo miidaamiyay ayaa isku qarxiyay suuq kalluun oo kuyaala magaalada Konduga ee waqooyiga-bari ee dalka Nayjeeriya maanta oo Sabti ah, waxaana ku dhintay ugu yaraan 19 qof, sida ay sheegeen ilo-wareedyo haayadaha ammaanka katirsan.
Intooda badan dadka ku dhintay qaraxa ayaa ahaa shacab. Ugu yaraan 50 qof oo kale ayaa ku dhaawacmay.
Ururka Booko Xaaraam ayaa lagu eedeeyay qaraxaas, inkastoo aysan weli sheegin in ay iyagu ka dambeeyaan.
Booko Xaaraam ayaa dishay dad gaaraya 20,000 waxayna barakicisay in ka badan labo milyan tan iyo markii ay sanadkii 2009 bilaabeen ololahooda ay ku rabaan in maamul Islaamiya ay ka dhisaan waqooyiga dalka.
Booko Xaaraam weli waxay wadaa weerarada dhimashada leh iyada oo dowladda Nayjeeriya ku andacoonayso in ay ka adkaadeen maleeshiyada Booko Xaaraam.
October 14, 2018 Ugu yaraan 16 qof oo ku geeriyootay labo qarax oo ka dhacay Baydhabo
November 7, 2018 Ilhaan Cumar oo ku guuleysatay aqalka Congress